Nhau dzeBhaibheri: Rumuko rwaJesu Kusvikira Kukuiswa Mutorongo kwaPauro - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Pazuva rechitatu pashure porufu rwake, Jesu akamutswa. Pazuva irero akaoneka kuna vateveri vake kashanu kakasianasiana. Jesu akapfuurira kuoneka kwavari kwamazuva 40. Tevere, apo vamwe vavadzidzi vake vachiona, Jesu akakwira kudenga. Mazuva gumi apashure Mwari akadururira mudzimu wake mutsvene pavateveri vaJesu vaimirira muJerusarema.
Gare gare, vavengi vaMwari vakaita kuti vaapostora vaiswe mutorongo, asi ngirozi yakavasunungura. Mudzidzi Stefano akatakwa namabwe navashori vake kusvikira afa. Asi tinoziva masarudzire akaita Jesu mumwe wavashori ava kuva mubatiri wake chaiye, uye akava muapostora Pauro. Tevere, makore matatu nehafu pashure porufu rwaJesu, Mwari akatuma muapostora Petro kundoparidzira Kornerio asiri muJudha neimba yake.
Anenge makore 13 apashure Pauro akavamba rwendo rwake rwokutanga rwokundoparidza. Parwendo rwake rwechipiri Timotio akakumbanira Pauro. Tinoziva kuti Pauro neshamwari dzake dzinofambira vakava sei nenguva dzinonyandura mukubatira Mwari. Pakupedzisira, Pauro akaiswa mutorongo muRoma. Makore maviri gare gare akasunungurwa, asi ipapo akaiswazve mutorongo ndokuurawa. Zvinoitika zveCHIKAMU 7 zvakaitika kwenhambo yamakore anenge 32.